INDAWO YOKUGCINA IBHENTSHI YASEGUMBINI LOKUGCINA (IINDIDI KUNYE NEPROSES & CONS) - UYILO LWEGUMBI LOKUHLAMBELA
Eyona uyilo Lwegumbi Lokuhlambela Indawo yokuGcina ibhentshi yaseGumbini lokuGcina (Iindidi kunye neProses & Cons)
Indawo yokuGcina ibhentshi yaseGumbini lokuGcina (Iindidi kunye neProses & Cons)
Nasi isikhokelo sethu kwi-faucet yokugqiba i-pros and cons kubandakanya ezona zigqibeleleyo kunye nezithandwayo. Xa ubeka indawo yokugqibezela kwigumbi lokuhlambela lamaphupha akho, kuya kufuneka ubeke ingcinga eninzi kulungiso, olufana neefompu zakho.
Ngaphandle kwesimo kunye nesimbo seompompo basekhaya lakho, nangona kunjalo, enye into oza kufuna ukuyikhetha ngononophelo kukuphela kombhobho wakho. Ukugqitywa kwipompo kuya kugqiba ukuba kulungele kangakanani uyilo lwakho lwangaphakathi.
Ukugqitywa kwetephu kukudityaniswa okusetyenzisiweyo kumphezulu wombhobho. Oku kugqitywa kunemisebenzi emibini. Okokuqala, benza ukuba itompu ibonakale inomtsalane kwaye okwesibini, ukugqitywa kwetheyipu kuhlala kunefuthe ekuzinzileni kwayo.
Kuxhomekeka kumbono wakho othile wokuba igumbi lokuhlambela lifanele ukujongeka njani, kuya kufuneka ujonge kwimipu eyahlukeneyo egqityiweyo kunye nezinto ezilungileyo kunye nezibi. Nazi ezinye zezona ziqhelekileyo igumbi lokuhlambela lamanzi ompompo Kugqityiwe.
uceba njani umtshato
Ukugqiba i-Chrome Faucet
Ikomityi Yokugqibela Yobhedu
Nickel Gqiba Faucet
I-Brass igqiba iipompo
I-oyile-iBhrashi yeBronze egqityiweyo
Ukugqitywa kweMatte emnyama
Custom Gqibezela ompompo
Yeyiphi eyona Faucet ihlala igqibile?
Yeyiphi eyona mpompo idume ngokuhlamba?
Yeyiphi indawo ogqiba ngayo eyona ilungileyo kwiibhafu zokuhlambela?
Eyona Faucet igqibayo ukugqiba amanzi aMandla?
Ukugqitywa kombhobho weChannel kuthathwa njengokutsala ngokuqaqamba kwesilivere okuwenza ukuba abe yinto ephawuleka nakweyiphi na indlu yangasese, ngaphandle kwesimbo.
I-Chrome yintsimbi yentsimbi i-chromium ethi yona, nangona ingakhaphukhaphu, nayo yomelele. Esinye isizathu sokuba kube yinto efanelekileyo yokugqiba umbhobho kukuba iyamelana nokubola. I-Chrome yenye yezona zinto zibiza kancinci zokugqiba kwaye kulula ukuzigcina.
I-Chrome iya kungcolisa ekuhambeni kwexesha, nangona kunjalo, kwaye ngelixa umphezulu opolishwe kakhulu unomtsalane, kukwathetha ukuba imikrwelo, iminwe kunye neendawo zamanzi ziya kubonakala kwaye zibonakale kakhulu. Ngethamsanqa i-chrome kulula ukuyicoca; Into ekufuneka uyenzile kukusula ngamanye amaxesha ngelaphu elithambileyo kunye nesepha.
I-Chrome igqibile ngemibhobho iya kulungela phantse lonke isitayile sokuhlambela, nangona zilunge ngakumbi kwizimbo zangoku, ezamashishini, kunye nezaseScandinavia.
Ityhubhu yokugqiba ithusi isebenzisa ubhedu lwezimbiwa njengengubo yokukhusela. I-Copper yiminerali eguquguqukayo esetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo ngenxa yokuqhutywa kwayo, ukungasebenzi kakuhle kunye nokuhamba kakuhle.
Ukugqitywa kobhedu kusebenza kakuhle ukuba uya kwindlu yasefama okanye isitayile se-rustic ujonge uyilo lwakho lokuhlambela. Baye basebenze ngeendlela zokuyila zaphakathi kwenkulungwane.
Eyona projekthi iphambili xa kufikwa kumbhobho wokugqibela wobhedu kukusetyenziswa kobhedu kukhusela itephu kumbhobho. Ziye zithathelwe ingqalelo njengezinomtsalane ngenxa yombala wegolide obomvu onesibindi.
Ngelixa ubhedu buyehla ngokwendalo xa lubhencekile kwisalfure kunye ne-oxide compounds, ubhedu olupheleyo lusajongwa njengomtsalane kwaye lunika abantu abadala abanomdla nabadala ukuba bazivelele.
Eyona nto iphambili kubhedu kugqitywa iimpompo kukuba yinto encinci ukuba yomelele kunezinye izinto ezigqityiweyo kolu luhlu. Kwakhona, ngenxa yombala wayo ongqindilili, isenokungahambelani nazo zonke iindlela zoyilo zangasese kwaye kunokuba nzima ukuzidibanisa nezinye izixhobo zakho.
Ukugqitywa kweNickel kufezekiswa ngokusebenzisa i-nickel yentsimbi ukunika ithumbu lokugqibela elinobukhazikhazi besilivere. Kukho iindidi ezimbini eziqhelekileyo zokuphelisa i-nickel ezisetyenziselwa ukuhlamba: i-nickel ye-brashi kunye ne-nickel ephosiweyo.
Olu hlobo lokugqitywa lufezekiswa okokuqala ngokuhlikihla i-nickel ngaphezulu kwepompo emva koko uhlambe umphezulu ngebrashi yocingo. Yonke le nto igqityiwe ngolungelelwaniso lokhuselo lwe-lacquer. Iziphumo umphezulu wesilivere okhuselweyo ekunqabeni nasekukhaleni.
I-nickel e-Brush yenye yezona zinto zinamandla kakhulu zeetampu ezikhoyo. Ngokungafaniyo ne-nickel e-polished, esiza kuthetha ngayo apha ngezantsi, i-nickel ebrashiweyo inendawo engaphezulu ye-matte ebangelwe kukungabikho kancinci okushiyekileyo ngebrashi yocingo. Umgangatho we-matte awufane ubonakalise amabala amanzi.
I-nickel ebrashiweyo igqibe ixesha elide kune-oyile yokuthambisa ioyile kunye ne-chrome. Ezi mpompo zilula ukuthelekisa nezinye izixhobo zokuhlambela.
Esi sigqibo sibiza kakhulu kune-chrome, kodwa sitshiphu emva koko sinyibilikise i-oyile. Kananjalo ayihambi kakuhle ngentsimbi engenasici, ke kuya kufuneka uyithathele ingqalelo loo nto xa ufikelela kwigumbi lakho lokuhlambela. Ngaphandle kwalonto, nangona kunjalo, sisiphelo esiguqukayo kakhulu esiya kuhamba phantse nasiphi na isitayile sokuhlambela.
ucebisa bani emtshatweni
Ukugqitywa kwe-nickel kugqityiwe kuphunyezwa nge-nickel-plated brass ukwenza indawo ekhanyayo kunye neyobonakalisayo. Iimpompo ezisebenzisa olu hlobo lokugqiba zihlala ixesha elide kwaye kulula ukuzicoca.
I-con con enye ke, kukuba ezi ntlobo zigqityiweyo zinendawo ebonakalayo ebonakalayo ukuze ukushicilelwa kweminwe kunye neendawo zamanzi zibonakale kakhulu. Kuya kufuneka usule ezi mpompo kwaye uzicoce rhoqo. Zikwenye yezinto ezibiza kakhulu ukugqiba kolu luhlu.
I-faucet egqityiweyo yokugqibezela iipompo ijongeka intle kwizindlu zangasese zemveli nezangoku. Kukwindlela efanelekileyo yokuhlambela yaseYurophu okanye yaseVictorian.
Iimpompo zokugqiba i-Brass zisebenzisa ubhedu bentsimbi kwiingubo zazo. I-Brass yintsimbi yobhedu, ke ukugqitywa kobhedu kunombala omdaka obomvu kubo. Kukho iindidi ezimbini eziqhelekileyo zobhedu ezigqityiweyo ezisetyenziselwa iipompo zangasese: ubhedu olukhazimlisiweyo kunye nobhedu be satin.
Le yinto yokugqibezela yetephu yakudala eveliswa ikakhulu kukucoca ubhedu oluqinileyo kwaye uyigqibe nge-lacquer ukunciphisa ukungcola.
Abanye abavelisi bavelisa iipompo zokugqibela zobhedu ngokusebenzisa ii-alloys zentsimbi endaweni yobhedu. Ezi alloys zonyulwe ngaphambi kokuba kongezwe i-lacquer.
Zombini ezi ndlela ziphela zivelisa ukuqaqamba okuqaqambileyo, okuqaqambileyo nokubonakalisa kakhulu. Ziza ngemibala eyahlukeneyo enomtsalane yegolide.
Ukugqitywa kobhedu olugqityiweyo luxabisekile ngokuhlala kwabo kwaye ngenxa yokuba bengangcolisi. Zibukeka zintle kwaye zikhazimlisiwe kwaye zihamba kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo, ukusuka kwindabuko ukuya ekuvuneni. Izitayile zoyilo ezincinci kunye nezinto zokuncedisa ziya kujongeka zilungile ngeepompo zokugqibela zebrashi.
yintoni isipho seminyaka eyi-12
Ukungancedi kubhedu olukhazimlisiweyo kukuba kuyabiza kancinci kunezinye ezigqityiweyo esixoxa ngazo kwesi sithuba. Umgangatho oqaqambileyo wobhedu ogqityiweyo ogqityiweyo umbhobho uyathandeka, kodwa kunokwenzeka ukuba ubonise amabala amanzi kunye neminwe yeminwe. Umaleko we-lacquer uya kuthi ekugqibeleni ube buthuntu.
Ityhubhu yobhedu inombhalo ogqityiweyo ogqityiweyo ukuze ityhubhu egqityiweyo yeplastikhi ibe nokubonakala okuthe tye xa kuthelekiswa nobhedu olukhazimlisiweyo.
Umgangatho we-matin wobhedu obugqityiweyo beepompo zifihla iminwe yeminwe kunye neewermarket ezingcono kunobhedu olukhazimlisiweyo, ke kulula ukuba zigcinwe zicocekile. Nangona kunjalo, kunzima ngakumbi ukufumana izincedisi kunye nolunye ulungiso oluhambelana nokubonakala kwe-satin brash.
Ukuba uceba ukusebenzisa izitayela zendabuko, zangoku okanye zangoku zokuhlambela, i-satin zethusi ezigqityiweyo zifanele zilungele umbono. Zicocekile kwaye zikhangeleka zilula kodwa umbala otshisiweyo wegolide-brown unika umoya wobuhle kunye nokunethezeka.
Iipompo zobhedu ezigqityiweyo ngeoyile ziyafumaneka kwiindidi zemibala emdaka. Ezi zigqityiweyo zenziwe mnyama ukuba zibonakale ngathi zezobhedu ezindala, ngenxa yoko ziimpompo ezinkulu onokuzisebenzisa ukuba ufuna ukubukeka kweediliya okanye kweantiki.
Ibronze yebrashi e-oyile yomelele kwaye umphezulu awubonisi nyani imidlalo yezamanzi kunye neminwe yeminwe ngoko kulula ukuyigcina icocekile. Kodwa ke zibiza kancinci.
Le alloy esekwe kwisinyithi iyamelana nokubola kunye nomhlwa. Ukugqitywa kwesinyithi esingenasici kunendawo ebonakalayo ebonakalayo efana nesilivere yesilivere exabisekileyo kodwa ifikeleleka ngakumbi kwaye ihlala ixesha elide.
Ukugqitywa kwentsimbi engenasici kulula ukuyicoca, kusule nje ngesepha kunye namanzi. Banqabile ukukhuhla. Zibiza kancinci, nangona kunjalo.
Ukuba uyila igumbi lokuhlambela elisebenzisa iindlela zale mihla, ezamashishini, okanye zangoku ezi ntlobo zilungileyo zeefompo ekufuneka ujonge kuzo. Ikwajongeka ilungile ngomthi okanye ngeemabhile, ke ukuba ucinga ukusebenzisa ezi zinto kwiitafile zakho, ezi mpompo ziya kuzidibanisa kakuhle.
Ukugqitywa kweMatte emnyama kufezekiswa ngokusebenzisa isambatho somgubo kwintsimbi, intsimbi, okanye ubhedu. Ukugqitywa kwesiphumo kunokuba buthuntu okanye i-satin.
Iifompu zokugqibela zeMat Black kulula ukuzicoca kwaye azizukubonisa uprintwe ngeminwe okanye ii-smudges njengoko kugqityiwe emva koko kuya kugqitywa ngokuqaqambileyo.
Zithathwa njengezihambileyo kwaye zihamba kakuhle kwaye zihamba kakuhle kwi-art deco, yanamhlanje, eclectic, kunye neendawo zokuhlambela ezincinci.
Ezona mpahla zintle zomlingani
Ukuba akukho nanye kwezi zinto sizigqibileyo sizidwelise apha ngentla njengezinto onqwenela ukuzisebenzisa, kuya kufuneka ujonge kwiimpompo zesiko.
Ezinye izinto ezigqityiweyo zentsimbi zibandakanya igolide, ubhedu, isilivere, ubhedu, i-zinc kunye ne-pewter.
Unokufumana kwakhona iipompo ezigqityiweyo ngepeyinti okanye umgubo we-powder kwimibala eyahlukeneyo kunye nee-shades. Kukwakho neefomethi zeekheram kunye neglasi zokugqiba ezinokuthi zifakwe glazed ukuze zitshatise zakho isitya sokuhlambela .
Buza umenzi wakho ukuba enze ikhathalogu epheleleyo yokugqibezela umpu ngaphambi kokuba wenze isigqibo sokugqibela.
Ezinye zezona zixhobo zokugqibela zokugcina iifompo ezikhoyo zigqityiwe nge-nickel esithethileyo ngasentla.
Ngelixa i-nickel ephosiweyo kunye ne-nickel e-brushed zihambelana ngokulinganayo xa kufikwa kumba wokuhlala, qaphela ukuba umphezulu okhanyayo we-nickel opolileyo uya kuthanda ngakumbi ukubonakalisa amabala kunye ne-smudges. Ukugqitywa kweNickel kukwabiza kancinci kunezinye iintlobo zokugqitywa esithethile ngazo.
Ukuba ukuhlala ixesha elide kubaluleke kakhulu kuwe, kuya kufuneka ujonge into efumanekayo kumvelisi ngentsimbi engenasici, ubhedu, kunye nobhedu njengoko nazo zihlala zizinzile kwaye zinexabiso elincinci nge nickel.
I-Chrome yeyona nto ixhaphakileyo yokugqiba itompo yangasese. Ukukhanya kweetoni zesilivere ezenziwe ngombhobho wokuhlambela ogqityiweyo kuthathwa njengomtsalane. Ikwahluka kakhulu kwaye iya kulungela iindlela ezahlukeneyo zangasese.
Ihlala ixesha elide, nangona kungenjalo ukuba ingagungqi njenge-nickel kunye nezinye izinto ezigqityiweyo ezenziwe ngetephu. Esinye sezizathu eziphambili zokuthandwa kwayo kukufikeleleka kwayo.
Ungasoloko ufumana ibhanti elungileyo ye-chrome egqityiweyo malunga ne- $ 50 ngelixa i-nickel egqityiweyo itephu inokuqhuba ukuya kuthi ga kwi-600 yeedola.
Ukugqitywa kwesinyithi, nokuba yi-chrome, kuthathwa njengezona zigqibeleleyo kwiipompo zokuhlambela. Uninzi lwezinto ezigqityiweyo ezichazwe apha ziyamelana nokubola ezibalulekile kwiipompo zangasese.
Inqaku lokugqibela ekufuneka ulithathele ingqalelo xa uzama ukuthatha isigqibo ngeyona mpompo yokuhlamba yangasese yindlela eya kulunga ngayo nesitayile sakho sokuhlambela. Ukugqitywa kombhobho owukhethileyo kufanele ukuxhasa igumbi.
Ukuba uhlala kwindawo enamanzi anzima, uya kuba nengxaki neendawo zamanzi. Nangona uninzi lwezigqibo esizibhale apha zilula ukuzicoca, zisule nje ngesepha namanzi, unokufuna ukukhetha izinto ezingabonisi amabala amanzi ngokulula.
Izinto ezikhazimlayo okanye ezibonakalisa kakhulu ayisiyonto ilungileyo yokugqitywa kwetephu kwindawo ezinamanzi anzima. Iindawo zamanzi ziya kubonakala kwiindawo ezikhanyayo, ngaphandle kokuba ufuna ukucoca i-faucet yakho rhoqo, hamba nezinye izinto.
Ukugqitywa kweMatte akuyi kubonisa amanqaku amanzi ngokulula njengokuqaqamba okanye ukugqitywa kokugqitywa. Izinto ezithi matte, ibrashi okanye i-satin zezona mpompo zigqibeleleyo zamanzi anzima. (Ngaphandle komnyama omnyama)
Kwizinto esizigqibileyo apha, ezona zilungileyo ziya kuba yi-brashi nickel, ityin yobhedu, i-bronze ye-rubbed.
Qaphela, ukugqitywa kokunye esikukhankanyileyo apha yayiyi-matte kwaye, ngelixa isitsho i-matte, i-matte emnyama ayisiyompompo elungileyo yeendawo ezinamanzi anzima. Umbala omnyama wokugqiba uya kuthelekiswa neempawu zamanzi amhlophe ezenza ukuba zibonakale ngakumbi.
Nokuba ungalufumana luphi uhlobo lokugqiba kwiipompo zakho zangasese, eyona ndlela yokuthintela amanqaku amanzi anzima kukumisa kwangoko iimpompo zakho emva kokusetyenziswa. Amabala amanzi avela kuphela xa amanzi omile ngaphezulu.
izipho zomtshato zomzuzu wokugqibela
Kuya kufuneka ngamanye amaxesha ucoce iimpompo zakho ngesisombululo samanzi, iviniga, ijusi yelamuni, kunye nesepha yesitya. Esi sisombululo siza kulahla nayiphi na iminerali eyakhiweyo ebangela amanqaku amanzi.
Hlanganisa iviniga kunye namanzi (sebenzisa umlinganiselo omnye ukuya kwelinye) uze udibanise ijusi lemon kunye namaconsi ambalwa esepha yesitya. Beka esi sisombululo kwibhotile yokutshiza kwaye uyitshize kwiipompo zakho.
Vumela isisombululo sihlale malunga nemizuzu engamashumi amabini. Emva koko, coca isisombululo ngobunono nge-rag okanye isiponji. Qaphela ukuba ungazisebenzisi izinto ezirhabaxa njengoko ungafuni ukukrwempa ukugqiba.
Ukufumana umxholo onxulumene noko batyelele inqaku lethu malunga izixhobo zoyilo zangasese ungasebenzisa ukwenza kunye nokubona ngeso lengqondo iiprojekthi zakho zangasese.
iintlobo zeentlobo zefenitshala
iikhitshi ezinemigangatho emnyama
isafire eluhlaza okwesibhakabhaka kunye nomsesane wokubandakanya idayimani
isipho somtshato kumyeni